Slack Integration ho an'ny Google Ads | Ampifandraiso ny doka sy ny Slack
clever ads Midira amin'ny Slack
Midira amin'ny Slack
Slack fampidirana for Google Ads , Microsoft Ads &amp; Facebook Ads
Tefeo ny fomba amam-panao handray fanairana amin'ny firesahana
Mandray kisary & mari-pandrefesana ny tantara mikasika ny 'fampisehoana
Fandaharam-potoana isan'andro, na isan-kerinandro ny tatitra mba hahazoana ny mari-pandrefesana ao amin'ny chat
Ampio amin'ny Slack
Tombony azo amin'ny Clever Ads
Rehefa tiantsika ny hoe: ianao dia ho ampy ny fotoana fahavaratra hankafy izany kafe maraina tianao be dia be! ☕
Tena fotoana mpamonjy
Azonao atao ny manana vata kely iray misokatra, izay mamonjy fotoana amin'ny fahitana ny Google Ads , Bing Ads &amp; Facebook Ads manan-danja indrindra amin'ny toerana iray.
Mandrindra ny andro isan-andro asa tsara kokoa
Ity fampiharana ity dia ahafahana manara-maso ny fandrosoan'ny fampielezan-kevitra amin'ny alàlan'ny fandrefesana, ny kisary ary ny famintinana mivantana amin'ny resaka Slack .
Raha ampitahaina amin'ny fitaovana mitovy amin'izany eny an-tsena izay mitaky fandoavam-bola, ny Clever Ads dia tsy manome vola anao hampiasa izany.
Sivano ny Google Ads , Microsoft Ads ary Facebook Ads izay mahaliana anao indrindra ary mandray ny mari-pahaizana sy ny kisary amin'ny zava-bitany.
Access ny ny anaty fiara
Mahazoa fidirana amin'ny dashboard anao manokana ary ampanjifa ny fomba tianao handraisana ireo metatrao amin'ny alàlan'ny Slack . Sivano ny kaonty fanaovana dokam-barotra izay mahaliana anao indrindra ary alamino ny tatitra ataonao.
Fa maninona no apetraka ny rindrambaiko Clever Ads Slack
Ny metrika manan-danja mifandraika amin'ny Google Ads , Microsoft Advertising anao ary Facebook Ads toy ny impression, fiovam-po, tsindry ary maro hafa dia ho hita mivantana ao amin'ny Slack .
Mangataha ny sary ny mahita ny fivoaran'ny ny tiany mimetatra (fahatsapana, vidiny, fiovam-pony, sns) ny voafantina kaonty dokam-barotra. Toy ny hoe mandeha, ny sary dia mendrika teny arivo.
Raiso ny mari-pandrefesana famintinana isan'andro / isan-kerinandro eo amin'ny fantsona tiany mba hahatonga azy ireo ho vahoaka ho an'ny ekipa na hiaro azy ny tenanao amin'ny alalan'ny fisafidianana ny safidy hafatra mivantana.
Mangataha torohevitra momba ny fanatsarana ny Google Ads na Facebook Ads amin'ny alàlan'ny hafatra tsotra. Ho afaka hanome sosokevitra zavatra toa ny fampidirana karazana fampielezan-kevitra hafa izahay, fanitsiana ny tetibolan'ny fampielezan-kevitra na fanovana ny lasibatra fampielezan-kevitra
Ahoana no hanomboka?
Tao anatin'ny iray minitra monja dia azonao atao ny manampy ny Clever Ads Slack ao amin'ny kaontinao
4 dingana ihany
Mametraka ny fampiharana
Ampio ny fampiharana Clever Ads Slack amin'ny fipihana ny bokotra "Add to Slack ".
Midira ao amin'ny mpanao dokam-barotra ny kaonty
HIDITRA mampiasa ny Google, Microsoft, ary / na ny Facebook Account mifandray amin'ny dokam-barotra ny kaonty.
Select ny tantara
Safidio ny kaonty sy ny mifamadika naniry ny maro eo amin'ny tantara na oviana na oviana.
Ataovy indrindra avy amin'ny fampiharana
Manomboha fahazoana tatitra amin'ny fangatahana ny Slack ho famintinana, sary sns.
Ianao ho tsara orinasa
Raha manana fanontaniana tsy voavaly eto ambany ianao dia afaka manoratra aminay amin'ny assistant@cleverads.com
Inona no fampiharana no marina?
Ny tanjon'ity fampiharana ity dia ny hanamora ny fiainanao ary tianay ny "hamonjy fotoana ampy hankafizana an'io kafe maraina tianao io." Raha vao mampifandray ny Google Ads tianao hiaraha-miasa ianao dia azonao atao ny manomboka mahazo marimaritra iraisana sy kisary mivantana ao amin'ny Slack na Microsoft Teams chat amin'ny alàlan'ny fandefasana hafatra amin'ny bot fotsiny. Amin'ity fomba ity dia mamonjy ny fotoananao sarobidy ianao satria tsy mila miditra amin'ny Google Ads isan'andro ianao.
Ny sasany amin'ireo fiasa mahatalanjona atolotry ny fampiharana dia:
Metrika sy sary : ny metrika sy ny sary manan-danja mifandraika amin'ny Google Ads toy ny fiheverana, ny fiovam-po, ny tsindry ary maro hafa dia ho azonao mivantana amin'ny resakao.
Tatitra voalahatra : Raiso ny metatrao isan'andro na isan-kerinandro amin'ny fantsonao tianao hampahafantarana azy ireo ho an'ny ekipanao na hitahirizanao tena amin'ny alàlan'ny fisafidianana ny safidin'ny hafatra mivantana.
Torohevitra : Mangataha torohevitra momba ny fanatsarana ny Google Ads amin'ny alàlan'ny fandefasana hafatra tsotra. Ho afaka hanome sosokevitra zavatra toa ny fampidirana karazana fampielezan-kevitra hafa izahay, fanitsiana ny tetibolan'ny fampielezan-kevitra, na fanovana ny lasibatra fampielezan-kevitra.
Ho avy tsy ho ela Fanairana : Mahatsapa ho azo antoka kokoa amin'ny kaonty Google Ads Clever Ads ny bot botsy marani-tsaina raha misy zavatra tsy mahazatra mitranga ao amin'ny kaontinao.
Ny fampiharana dia 100% maimaim-poana!
Maninona aho no mila mampifandray ny Google Ads kaonty?
Mba hahafahan'ny fampiharana mihazakazaka tsara dia mila angona avy amin'ny kaonty Google Ads Ho an'ny tanjona fiarovana, Google dia tsy mamela na iza na iza hahita ny refy misy anao amin'ny alàlan'ny default, noho izany dia mila alalana aminao izahay. Izahay dia mitaky ny ambaratonga ambany indrindra amin'ny fidirana amin'ny Google Ads izay antsoina hoe "Tantano ny Adwords anao." Ity no hany karazana fahazoan-dàlana ilainay mba hamelana anay hanamarina ny refy misy anao ary hamokatra tabilao sy famintinana.
Azo antoka ve ny mampifandray ny Google Ads kaonty?
Milamina 100%! Clever Ads dia Partner Google Premier. Mba hahatratrarana an'ity anaram-boninahitra ity dia tsy maintsy mahafeno ireo fenitra sy mason-tsivana avo indrindra an'ny Google izahay. Ireo vokatra samihafa novolavolainay nandritra ny taona maro dia nametraka laza matanjaka eo amin'ireo orinasa 150.000.
Ahoana no rakitra soa aman-tsara foana?
Vantany vao miditra ao amin'ny kaonty Google-nao ianao dia manangona token fidirana ao amin'ny angon-drakitra voafafa. Ny lakile dia ampiasain'ny Clever PPC API anay ihany ary tsy zaraina amin'ny Slack na Microsoft Teams . Rehefa mahazo ny angona mifandraika avy amin'ny Google Ads izahay, dia avadinay ho lasa Slack na Microsoft Teams ary alefanay any amin'ilay resaka nifanaovanao izay nanoratanao didy.
Ny hafatra rehetra na anatiny na miaraka amin'i Google, Slack , na Microsoft Teams dia voahidy amin'ny alàlan'ny TLS 1.2 (Transport Layer Security). Ny tranokala miaraka amin'ny protokol HTTPS ihany no idiranay. Hatramin'ny fiafaranay dia tsy afaka miditra afa-tsy ireo metatra Google Ads azonao izahay satria nomenao alalana hanao izany. Amin'ny toe-javatra tsy misy dia avela mahazo mihazona angona ivelan'ny masontsivana voalaza isika.
Moa ve ianao manana olana na mampiasa fampiharana izany?
Azonao atao ny mifandray aminay amin'ny alàlan'ny fandefasana mailaka any amin'ny assistant@cleverads.com na amin'ny famenoana fotsiny izao taratasy manaraka izao:
Misaotra anao! Nandray ny hafatra!
Oops! Nisy zavatra tsy nety. Azafady andramo indray.